မြေကွက်ရောင်းပေးဖို့ ပါမစ်မိတ္တူ ပေးခဲ့မိပါသလား ? - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
မြေကွက်ရောင်းပေးဖို့ ပါမစ်မိတ္တူ ပေးခဲ့မိပါသလား ?
26 Nov 2019 1:46 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
1051 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
အခုတစ်လောအိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်တွေပြန်လည်နှိုးထလာပြီးအထင်နဲ့အိမ်ခြံမြေကွက်ရောင်းလိုသူအချို့ဟာ ဈေးကောင်းပေးဝယ်သည် ဆိုတဲ့ အိမ်ခြံမြေပွဲစားတွေနဲ့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ မြေကွက်ပြန်ရောင်းချင်အောင်လည်းအိမ်ခြံမြေပွဲစားများ ၊ အကျိုးဆောင်များဟာ အွန်လိုင်မှာရောင်းမယ့်မြေကွက်ကို မြို့နယ်မြေပုံပေါ်မှာ လမ်းညွန်မြှားပြပြီးရောင်းနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။
ဒါနဲ့တင်အားမရသေးလို့ မြေကွက်နဲ့အိမ်ကိုပါ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်ထားကြတယ်။ ဈေးနှုန်းကိုတော့ ရောင်းချင်သူအပ်ထားတဲ့နှုန်းထက် ၁၀ သိန်းမှ ၁၅ သိန်းလောက်ပိုတင်ထားကြတယ်လေ။ ဒါကလည်းအဆိုးမဆိုးနိုင်ပါဘူး။ ပွဲစားပါဆိုမှပွဲခမကျန်ဘဲနဲ့ ဘယ်သူလုပ်ပေးချင်မှာလဲမဟုတ်ဘူးလား အွန်လိုင်းဆိုတာကတော့ လူငယ် ၊ လူလတ်များသာအများဆုံးအသုံးပြုကြတာပါ။ လူကြီးပိုင်းတွေကတော့ အာမခံချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ အထောက်အထားပြည့်စုံတဲ့ ကြေးမုံ/မြန်မာ့အလင်းသတင်းတွေမှာပါတဲ့ ၊ အိမ်ခြံမြေကြော်ငြာတွေကိုဘဲ ကြည့်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းကြည့်တာများပါတယ်။
ကြေးမုံ/မြန်မာ့အလင်းစာတွေမှာ ကြည့်လိုက်ရင်လည်း ၊ ဈေးကောင်းပေးဝယ်သည် ဆိုတဲ့ကြော်ငြာတွေကလည်း ၊ တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်ကြော်ငြာကြတယ်။ ရောင်းချင်သူတွေကလည်းဈေးကောင်းပေးမယ်ဆိုတော့ အားကိုးကြတာပေါ့။တကယ်ဆက်သွယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက် က မကိုက်ပါဘူး ဝယ်ရင်းဈေးထက် ၁၀ သိန်း သိန်း ၂၀ လောက်အထ်ိဈေးနှိမ့်ခံရတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ (၂) နှစ် လောက်ကဝယ်ထားတဲ့မြေကွက်ကိုဈေးလျော့ပြီး ပြန်ရောင်းတာတောင် ဝယ်စဉ်က သိန်း (၂၀)ပိုပေးခဲ့ရလို့ ဈေးကြီးကြီးမိသွားတယ်လို့ ပြန်ဝယ်သူက အားမနာဘဲပြောသေးတယ်။တကယ်တန်းကျတော့ သူပြောသလိုကိုယ်လည်းဝယ်စဉ်ကအဲဒီလို ပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့ဝယ်ခဲ့တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး“ ပိုက်ဆံ” က အလွယ်တကူ နှိုက်ယူလို့ရတဲ့ငွေတွင်းရှိတာမှမဟုတ်တာဈေးမှန်ရဖို့ ရပ်ကွက်အနှံ့တောနင်းရှာဝယ်ယူရတာလေ။
အခုလည်းကြည့်လေ “ နှင်းနှင်း ” တစ်ယောက်မိမိရဲ့ မိသားစုအတွက် ငွေအရေးကြီးတာနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂) နှစ်က ဝယ်ထားတဲ့ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းက မြေကွက်ကို (၁၀)သိန်းလောက်အရှုံးခံပြီးရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ သတင်းစာနဲ့အွန်လိုင်း မှာကြော်ငြာနေတဲ့ အကျိုးဆောင်ပွဲစားတစ်ချို့နဲ့ဆက်သွယ်ကြည့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဒဂုံဆိပ်ကမ်းကပွဲစားတစ်ဦးနဲ့ ချိတ်ဆက်မိလို့ ပွဲစားကဝယ်သူကိုခေါ်လာပါတယ်။
နှစ်ဘက်ရောင်းဈေးညှိနှိုင်းပြီး ပြေလည်တာနဲ့ မြေကွက်ရှိတဲ့ နေရာကိုလိုက်ပြပါတယ်။ဝယ်သူကလည်း အရှေ့လှည့်မို့သဘောကျပါတယ်။ပွဲစားနဲ့ရောင်းသူဝယ်သူတွေမြေကွက်အနေအထားကြည့်ပြီးစကားပြောဆိုနေစဉ်မှာ အသက် (၃၅) နှစ်ကျော် လူငယ်တစ်ဦးသူတို့နားကိုရောက်လာပါတယ်။အစ်ကိုတို့အခုအရောင်းအဝယ်လုပ်မှာက မြေကွက်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဟင် မြေကွက်နံပါတ် “ 007 ” လေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ “ဟင်…..ဟုတ်လား ”
ကျွန်တော် (20 ‘x 60 ‘) ဝယ်ထားတာလည်းအဲဒိင်္နံပါတ်ဖြစ်နေတယ်။ “ ဟိုက်” ….ဒါဆိုရင် ညီလေး အလိမ်ခံလိုက်ရပြီထင်တယ် မဖြစ်န်ိုင်ပါဘူးဗျာ ရောင်းသွားတဲ့သူတွေပြောတာက “” မြေကွက်ရဲ့ခေါင်းရင်းက ပိုနေတဲ့မြေကွက်ကိုရောင်းတာလို့ ပြောတယ် ဟု ငြင်းခုံနေတယ်။ သူပြောပုံထောက်ရင် “ 007 ”မြေကွက်ပါမစ်ကို အဆင့်ဆင့်ရောင်းဝယ်ကြရင် ပါမစ်မိတ္တူကူးယူထားသူတစ်ဦးက မြေပိုအကြောင်းပြပြီးရောင်းသွားခြင်းကိုဝယ်ထားမိသူတစ်ဦးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။
မြေပို ဝယ်ထားသူက အဲဒီလိုလာပြောတဲ့အတွက် မြေကွက်ဝယ်ယူဖို့လိုက်လာတဲ့ သူတွေက မဝယ်ရဲတော့ဘဲ ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ပြီးပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါဦီးမယ် ဆိုပြီး ပြန်သွားကြပါတော့တယ်။
အခုရောင်းမယ့် “ နှင်းနှင်း ” က မြေချပါမစ်ရင်းနဲ့ စာချုပ်အဆက်အစပ်တွေပြပေမဲ့အရှုပ်အရှင်းရှိတယ် ဆိုပြီး နောက်ဆုတ်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ရောင်းသူ “နှင်းနှင်း” မှာတော့ အမှန်အကန်မြေချပါမစ်မူရင်းနဲ့ စာချုပ်အဆက်အစပ်တွေပြနိုင်ပါလျက် ၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်ရာမှာ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာသွားနိုင်တာပေါ့ “နှင်းနှင်း ” လည်း အခက်အခဲတွေ့သလို 007 မြေကွက်မိတ္တူနဲ့ မြေပိုဝယ်ထားမိသူမှာလည်း အလိမ်ခံလိုက်ရလေခြင်းဆိုပြီးလိမ်ရောင်းသွားတဲ့သူတွေကိုပြဿနာရှင်းပေးဖို့လိုက်ရှာနေလာက်ပြီ။
ကျွန်န်ုပ်အနေနဲ့လည်း ဟိုစဉ်က မြေနဲ့အိမ်ရောင်းချင်သူများအလုပ်လာအပ်ရင်မိတ္တူ တစ်စုံကူးပေးထားပါလားလို့ တောင်းခဲ့ဘူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ခြံမြေမြေကွက်ရောင်းချင်သူများအနေနဲ့ အိမ်ခြံမြေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မြေချပါမစ်မိတ္တူတို့ ၊ စလစ်မိတ္တူ ၊ ဂရန်မိတ္တူတို့ကို အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တွေကိုမပေးချင်ကြတာ ဒါကြောင့်ပါလားလို့ သင်ခန်းစာတစ်ခုရလိုက်ပါတယ်။
လွှတ်တော်ရှေ့နေမောင်ကောင်းဖေ မှ iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) အတွက် အထူးရေးသားဖော်ပြသည်။ Credit: iMyanmarHouse.com
အခုတဈလောအိမျခွံမွအေရောငျးအဝယျတှပွေနျလညျနှိုးထလာပွီးအထငျနဲ့အိမျခွံမွကှေကျရောငျးလိုသူအခြို့ဟာ ဈေးကောငျးပေးဝယျသညျ ဆိုတဲ့ အိမျခွံမွပှေဲစားတှနေဲ့ ဆကျသှယျစုံစမျးလာကွတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ မွကှေကျပွနျရောငျးခငျြအောငျလညျးအိမျခွံမွပှေဲစားမြား ၊ အကြိုးဆောငျမြားဟာ အှနျလိုငျမှာရောငျးမယျ့မွကှေကျကို မွို့နယျမွပေုံပျေါမှာ လမျးညှနျမွှားပွပွီးရောငျးနကွေတာကိုတှရေ့တယျ။
ဒါနဲ့တငျအားမရသေးလို့ မွကှေကျနဲ့အိမျကိုပါ အှနျလိုငျးပျေါမှာ ဓါတျပုံရိုကျပွီး တငျထားကွတယျ။ ဈေးနှုနျးကိုတော့ ရောငျးခငျြသူအပျထားတဲ့နှုနျးထကျ ၁၀ သိနျးမှ ၁၅ သိနျးလောကျပိုတငျထားကွတယျလေ။ ဒါကလညျးအဆိုးမဆိုးနိုငျပါဘူး။ ပှဲစားပါဆိုမှပှဲခမကနျြဘဲနဲ့ ဘယျသူလုပျပေးခငျြမှာလဲမဟုတျဘူးလား အှနျလိုငျးဆိုတာကတော့ လူငယျ ၊ လူလတျမြားသာအမြားဆုံးအသုံးပွုကွတာပါ။ လူကွီးပိုငျးတှကေတော့ အာမခံခကျြခိုငျခိုငျမာမာနဲ့ အထောကျအထားပွညျ့စုံတဲ့ ကွေးမုံ/မွနျမာ့အလငျးသတငျးတှမှောပါတဲ့ ၊ အိမျခွံမွကွေျောငွာတှကေိုဘဲ ကွညျ့ပွီး ဆကျသှယျစုံစမျးကွညျ့တာမြားပါတယျ။
ကွေးမုံ/မွနျမာ့အလငျးစာတှမှော ကွညျ့လိုကျရငျလညျး ၊ ဈေးကောငျးပေးဝယျသညျ ဆိုတဲ့ကွျောငွာတှကေလညျး ၊ တဈနတေ့ဈမြိုးမရိုးရအောငျကွျောငွာကွတယျ။ ရောငျးခငျြသူတှကေလညျးဈေးကောငျးပေးမယျဆိုတော့ အားကိုးကွတာပေါ့။တကယျဆကျသှယျကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ မှနျးခကျြနဲ့နှမျးထှကျ က မကိုကျပါဘူး ဝယျရငျးဈေးထကျ ၁၀ သိနျး သိနျး ၂၀ လောကျအထိဈေးနှိမျ့ခံရတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ (၂) နှဈ လောကျကဝယျထားတဲ့မွကှေကျကိုဈေးလြော့ပွီး ပွနျရောငျးတာတောငျ ဝယျစဉျက သိနျး (၂၀)ပိုပေးခဲ့ရလို့ ဈေးကွီးကွီးမိသှားတယျလို့ ပွနျဝယျသူက အားမနာဘဲပွောသေးတယျ။တကယျတနျးကတြော့ သူပွောသလိုကိုယျလညျးဝယျစဉျကအဲဒီလို ပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့ဝယျခဲ့တာမြိုးတော့ မဟုတျပါဘူး
“ ပိုကျဆံ” က အလှယျတကူ နှိုကျယူလို့ရတဲ့ငှတှေငျးရှိတာမှမဟုတျတာဈေးမှနျရဖို့ ရပျကှကျအနှံ့တောနငျးရှာဝယျယူရတာလေ။
အခုလညျးကွညျ့လေ “ နှငျးနှငျး ” တဈယောကျမိမိရဲ့ မိသားစုအတှကျ ငှအေရေးကွီးတာနဲ့ လှနျခဲ့တဲ့ (၂) နှဈက ဝယျထားတဲ့ ဒဂုံဆိပျကမျးက မွကှေကျကို (၁၀)သိနျးလောကျအရှုံးခံပွီးရောငျးမယျဆိုတဲ့ စိတျကူးနဲ့ သတငျးစာနဲ့အှနျလိုငျး မှာကွျောငွာနတေဲ့ အကြိုးဆောငျပှဲစားတဈခြို့နဲ့ဆကျသှယျကွညျ့ပါတယျ။ နောကျဆုံး ဒဂုံဆိပျကမျးကပှဲစားတဈဦးနဲ့ ခြိတျဆကျမိလို့ ပှဲစားကဝယျသူကိုချေါလာပါတယျ။
နှဈဘကျရောငျးဈေးညှိနှိုငျးပွီး ပွလေညျတာနဲ့ မွကှေကျရှိတဲ့ နရောကိုလိုကျပွပါတယျ။ဝယျသူကလညျး အရှလှေ့ညျ့မို့သဘောကပြါတယျ။ပှဲစားနဲ့ရောငျးသူဝယျသူတှမွေကှေကျအနအေထားကွညျ့ပွီးစကားပွောဆိုနစေဉျမှာ အသကျ (၃၅) နှဈကြျော လူငယျတဈဦးသူတို့နားကိုရောကျလာပါတယျ။အဈကိုတို့အခုအရောငျးအဝယျလုပျမှာက မွကှေကျနံပါတျဘယျလောကျလဲဟငျ မွကှေကျနံပါတျ “ 007 ” လေ။ ဘာဖွဈလို့လဲ “ဟငျ…..ဟုတျလား ”
ကြှနျတျော (20 ‘x 60 ‘) ဝယျထားတာလညျးအဲဒိင်္နံပါတျဖွဈနတေယျ။ “ ဟိုကျ” ….ဒါဆိုရငျ ညီလေး အလိမျခံလိုကျရပွီထငျတယျ မဖွဈနိုငျပါဘူးဗြာ ရောငျးသှားတဲ့သူတှပွေောတာက “” မွကှေကျရဲ့ခေါငျးရငျးက ပိုနတေဲ့မွကှေကျကိုရောငျးတာလို့ ပွောတယျ ဟု ငွငျးခုံနတေယျ။ သူပွောပုံထောကျရငျ “ 007 ”မွကှေကျပါမဈကို အဆငျ့ဆငျ့ရောငျးဝယျကွရငျ ပါမဈမိတ်တူကူးယူထားသူတဈဦးက မွပေိုအကွောငျးပွပွီးရောငျးသှားခွငျးကိုဝယျထားမိသူတဈဦးဖွဈနတောကိုတှရေ့တယျ။
မွပေို ဝယျထားသူက အဲဒီလိုလာပွောတဲ့အတှကျ မွကှေကျဝယျယူဖို့လိုကျလာတဲ့ သူတှကေ မဝယျရဲတော့ဘဲ ကြှနျတျောတို့အိမျပွနျပွီးပွနျစဉျးစားလိုကျပါဦးမယျ ဆိုပွီး ပွနျသှားကွပါတော့တယျ။
အခုရောငျးမယျ့ “ နှငျးနှငျး ” က မွခေပြါမဈရငျးနဲ့ စာခြုပျအဆကျအစပျတှပွေပမေဲ့အရှုပျအရှငျးရှိတယျ ဆိုပွီး နောကျဆုတျသှားကွတာဖွဈပါတယျ။
ရောငျးသူ “နှငျးနှငျး” မှာတော့ အမှနျအကနျမွခေပြါမဈမူရငျးနဲ့ စာခြုပျအဆကျအစပျတှပွေနိုငျပါလကျြ ၊ အရောငျးအဝယျလုပျရာမှာ နှောငျ့နှေးကွနျ့ကွာသှားနိုငျတာပေါ့ “နှငျးနှငျး ” လညျး အခကျအခဲတှသေ့လို 007 မွကှေကျမိတ်တူနဲ့ မွပေိုဝယျထားမိသူမှာလညျး အလိမျခံလိုကျရလခွေငျးဆိုပွီးလိမျရောငျးသှားတဲ့သူတှကေိုပွဿနာရှငျးပေးဖို့လိုကျရှာနလောကျပွီ။
ကြှနျနျုပျအနနေဲ့လညျး ဟိုစဉျက မွနေဲ့အိမျရောငျးခငျြသူမြားအလုပျလာအပျရငျမိတ်တူ တဈစုံကူးပေးထားပါလားလို့ တောငျးခဲ့ဘူးတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိမျခွံမွမွေကှေကျရောငျးခငျြသူမြားအနနေဲ့ အိမျခွံမွနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ မွခေပြါမဈမိတ်တူတို့ ၊ စလဈမိတ်တူ ၊ ဂရနျမိတ်တူတို့ကို အိမျခွံမွအေကြိုးဆောငျတှကေိုမပေးခငျြကွတာ ဒါကွောငျ့ပါလားလို့ သငျခနျးစာတဈခုရလိုကျပါတယျ။
လှတျတျောရှနေ့မေောငျကောငျးဖေ မှ iMyanmarHouse.com (အိုငျမွနျမာဟောကျဈဒေါ့ကှနျး) အတှကျ အထူးရေးသားဖျောပွသညျ။ Credit: iMyanmarHouse.com
မွေးစားမိဘပိုင် အိမ်နှင့် မြေကို ၀ယ်မည်ဆိုလျှင်
မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းများကို အသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားလို့ရပါသလား။ မည်သည့်ဌာနတွင် လျှောက်ထား မလဲ?...
အဆောက်အဦပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ် (BCC) မကျပေးသည့်တိုက်ခန်းကို ၀ယ်သင့်သလား။ ၀ယ်မည်ဆိုလျှင် ဘာတွေသိထားဖို့လိုအပ်မလဲ?...
တည်ဆောက်ရောင်းချသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ၎င်းထံမှ ၀ယ်ယူသူတို့ ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်နှုန်းထားများ မည်သို့သတ်မှတ်ထားသလဲ ?...
ဂရန်မြေကို အရပ်စာချုပ်ဖြင့် ၀ယ်ယူလျှင် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာသလား ?
ပါမစ်မြေကို ၀ယ်ယူလျှင် ဘာတွေစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်သလဲ။ မည်သို့ ဂရန်လျှောက်ထားရမလဲ?
မည်သည့်မြေအမျိုးအစားကို မည်သူကရောင်းချခွင့်ရှိသလဲ ?
အိမ်သစ် ဝယ်ယူရာမှာ သတိပြုရမယ့် အချက်ခြောက်ချက်
မိထီလာ ECO ကျောင်း ရှေ့နှစ်လမ်းကျော် , မီထီလာ...
မိတ္ထီလာ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
200 သိန်း (ကျပ်)
အောင်မြေသာဇံ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပဲခူးမွို့တှငျ သီးသီးသနျ့သနျ့ အေးအေးဆေးဆေး...
ပဲခူး | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
​ဝေဇယန္တာ Citymart အနီး ဒုတိယထပ်​ ငှါးမည်